Enweghị nsogbu igwe Serial Manufacturers na Suppliers | China Enweghị nsogbu Machine Serial Factory
Ngwa Ngwa uwe nwanyị na-enweghị nke a na-enweghị, uwe ogologo ọkpa ụmụ nwoke, sọks nkwonkwo ụkwụ na-enweghị ntụpọ, akwa mmiri na-enweghị enweghị isi, uwe elu egwuregwu, jaket n'èzí, uwe ndị na-agba ígwè, ụlọikwuu na ihe ndị ọzọ. Njirimara Igwe a nwere ogologo oge ijikọ na 4 usoro kpo oku nke nwere ike hụ na arụmọrụ zuru oke nke bonding.The ọsọ nwere ike iru 8 mita kwa nkeji, na-eme ka arụmọrụ dị elu. Ngwa ngwa, ọnọdụ okpomọkụ na nrụgide nwere ike gbanwee n'otu n'otu maka elu na eriri ala, ka ọ dị ugbu a, ọnọdụ okpomọkụ na ...
Enweghị nsogbu ịkpakọba Machine MAX-900 / 20/40
Ngwa Ngwa uwe nwanyị na-enweghị nke a na-enweghị, uwe ogologo ọkpa ụmụ nwoke, sọks nkwonkwo ụkwụ na-enweghị ntụpọ, akwa mmiri na-enweghị enweghị isi, uwe elu egwuregwu, jaket n'èzí, uwe ndị na-agba ígwè, ụlọikwuu na ihe ndị ọzọ. Njirimara Igwe a nwere ogologo oge ijikọ na 4 usoro kpo oku nke nwere ike hụ na arụmọrụ zuru oke nke bonding.The ọsọ nwere ike iru 8 mita kwa nkeji, na-eme ka arụmọrụ dị elu. Ngwa ngwa, ọnọdụ okpomọkụ na nrụgide nwere ike gbanwee n'otu n'otu maka elu na ala eriri, Ka ọ dịgodị, na preheating temperatu ...
Ewepụghị ndina Bonding Machine N'ihi Jointing Ma ịkpakọba MAX-900-B
Ngwa Ngwa uwe nwanyị na-enweghị nke a na-enweghị, uwe ogologo ọkpa ụmụ nwoke, sọks nkwonkwo ụkwụ na-enweghị ntụpọ, akwa mmiri na-enweghị enweghị isi, uwe elu egwuregwu, jaket n'èzí, uwe ndị na-agba ígwè, ụlọikwuu na ihe ndị ọzọ. Ọrụ Njirimara: intingbịakọta na mpịachi nke bra, panty, traụza wdg Nka na ụzụ Nka Volta: AC 200-240V / 60Hz Nri nri: 0-10mita / nkeji Ike: 2000W Obosara Taya: 20mm Fever oghere obosara: 10mm, 15mm ma ọ bụ nabata nhazi Okpomọkụ. : 0-300oC 气压 pressure Nrụgide ọrụ: 0.5Mpa